सिम्रीक एअरको हेलिकोप्टरमै विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको खुलाशा, ट्रेकीङ कम्पनिले लुकायो विवरण !
मा प्रकाशित 692 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ६ कात्तिक । रसुवाको लाङटाङ हिमाल अरोहण गर्न आएका डेनमार्ककका एक नागरिकको हेलिकोप्टर उद्दारको क्रममा निधन भएको छ ।
हृदयघात भएपछि आपतकालिन उद्दारको लागि सिम्रीक एअरको हेलिकोप्टरले उद्दार गर्ने क्रममा हेलिकोप्टरमै उनको निधन भएको बताइएको छ ।
ग्राण्डी अस्पतालका अनुसार मृत्यु हुनेमा डेनमार्कका नागरिक एलिस फ्लेसवोर्ग रहेका छन् ।
‘यहाँ ल्याउँदा नै निधन मुटुको चाल बन्द भइसकेको थियो । उनीहरुले नै हेलिकोप्टर लिएर आएका थिए,’ ग्राण्डी अस्पतालका एक अधिकारीले भने,‘२ गते नै उहाँको निधन भएको हो ।’
डेनमार्कका वाणिज्यदूत समेत रहेका हरि धरेलको स्वामित्वमा रहेको हाइलेन्डर ट्रेकिङ कम्पनि मार्फत नेपाल आएका उनी श्रीमानसँगै थिए ।
हाइलेन्डर ट्रेकिङ कम्पनिका सञ्चालक हरि धरेलले श्रीमान श्रीमतीसँगै रहँदा श्रीमतीलाई हृदयघात भएको बताए । हृदयघातपछि समयमा हेलिकोप्टर पुग्न नसक्दा विरामीको निधन भएको समेत उच्च स्रोतको दाबी छ ।
विरामी भेटिएको स्थल
यता मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।
सिम्रीक एअरका मार्केटिङ प्रमुख योगेश सापकोटाले विरामीको हेलिकोप्टरमै मृत्यु भएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सिम्रीक एअरका महाप्रवन्धक प्रेम थापाले विरामी पर्यटकलाई आफूहरुले सकुशल उद्दार गरेर अस्पताल पुर्याएको भएतापनि पछिल्लो अवस्थाबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर, ग्राण्डी अस्पतालले भने हेलिकोप्टरमै विरामीको मृत्यु भएको बताएको छ ।
थापाले आफूलाई देव रेग्मी नाम गरेका व्यक्तिले तत्काल हेलिकोप्टर माग गरेको र आफूले उपलब्ध गराएको बताए ।
यता देव रेग्मीले भने आफूलाई इन्सुरेन्स कम्पनिबाट फोन र लोकेशन आएपछि आफूले तत्काल हेलिकोप्टर बुक गरेर पठाएको बताए ।
वाणिज्यदूतद्वारा विरामीको विवरण दिन अस्विकार !
हाइलेन्डर ट्रेकिङ कम्पनिका मालिक समेत रहेका हरि धरेल डेनमार्कका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत समेत हुन् । तर, उनैको कम्पनिको सम्पर्कमा नेपाल घुम्न आएका डेनमार्कका नागरिकको हेलिकोप्टरमै निधन भएको विषयमा विवरण माग गर्दा उनले विवरण दिन अस्विकार गरे ।
शुक्रबार नै भएको उक्त घटनाबारे दियोपोस्टले उनलाई शुक्रबार नै फोन सम्पर्क गरेर घटनाको विवरण मागेको थियो । तर, उनले विवरण दिन अस्विकार गरे । स्रोतका अनुसार उनको स्वामित्वमा रहेको हाइलेन्डर ट्रेकिङ कम्पनिले समयमा हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन नसक्दा विरामी पर्यटकको ज्यान गएको हो ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्विकृत नलिएसम्म विरामीको विवरण भन्न मिल्दैन । हामी तपाईंलाई २ दिनमा उपलब्ध गराउँछौँ,’ धरेलले दियोपोस्टसँग भनेका थिए । तर २ दिनपश्चात उनलाई सम्पर्क गर्दासमेत उनले विवरण उपलब्ध गराएनन् ।